Akụkọ gbọ njem
Mbido » Transportation
Atiya - Ụgbọ njem
Akụkọ na ozi banyere njem. Mmelite, ọnọdụ na ọdụ ụgbọ elu, ụgbọ elu, Boeing, Airbus, TSA, IATA, CLIA, ụgbọ oloko, ụgbọ ala, ịnyịnya ígwè na ihe niile gbasara njem na njem.pịa ebe a iji nyefee aro ozi ọma.
A kwalitere Justin Jones ka ọ bụrụ Senior Vice President Operational Strategy & Design, ebe ọ ga-eduga ...
Ụzọ ọhụrụ ahụ nwere ugboro abụọ kwa izu na Wednesde na Satọde n'ụgbọelu Embraer 175 ...
NASA na-achọ ndị isi ụgbọ elu maka ọrụ ụgbọ elu mmadụ ọhụrụ
Ndị na-eme ntuli aka onye isi ụgbọ elu ga-abụrịrị ụmụ amaala US nwere nzere bachelọ site na nzere...
1 2 3 ... 193 Osote
Ndị ahịa Black Friday: Otu ụzọ n'ụzọ atọ bụ adịgboroja December 4, 2021
Ihe omuma ohuru weputara taa site n'aka ulo oru cybersecurity zuru ụwa ọnụ CHEQ kpughere na bots na ndị ọrụ adịgboroja mejupụtara 35.7% nke ndị niile na-azụ ahịa n'ịntanetị a Black Friday.
Mmelite ọhụrụ na ọgwụ mgbochi COVID-19 na nkwalite December 4, 2021
Akwụsịla nnwale I-Spy COVID maka ọrịa siri ike: enweghị mmetụta buru ibu December 4, 2021
Mwepụta oghere NASA: Dec. 8 - Ebe a ga-ekiri December 4, 2021
NASA ga-enye mkpuchi ndụ nke ihe omume ndị dị mkpa na ozi nke onye na-ahụ maka mbara igwe nke Russia na ndị ọchụnta ego Japan abụọ ga-ebuba na ọdụ ụgbọ elu International na Wednesde, Disemba 8, ma laghachi n'ụwa na Sọnde, Disemba 19.
Mgbanwe Culinary na njikwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ India na mmemme teknụzụ nri December 4, 2021
Banarsidas Chandiwala Institute of Hotel Management and Catering Technology (BCIHMCT) na-ahazi mmemme nri mba ụwa na nke mba. BCIHMCT na-emepụta ihe ịma aka nri nri Korea niile nke India na mebere Chandiwala 20th Ensemble, iji meghee ikike, ngosi nka, na weta usoro nri ọhụrụ na ụwa ile ọbịa.
Minista njem nlegharị anya nke Thailand: Nke a ọ bụ ìhè na njedebe nke ọwara ahụ? December 4, 2021
HE Phiphat Ratchakitprakarn, Minister nke Tourism & Sports tinyere Khun Chattan Kunjara Na Ayudhya, osote Gọvanọ maka International Marketing (Europe, Africa, Middle East na America), Tourism Authority of Thailand (TAT) kwuru na "Imepeghachi Thailand Tourism: Nke a bụ Ìhè dị na njedebe nke ọwara ahụ?" mmemme nke British Chamber of Commerce Thailand haziri. Ihe omume a mere na Anantara Siam Hotel na Bangkok's Ratchaprasong.
Ụgbọ elu Southwest na-ekwupụta mgbanwe ọchịchị ọhụrụ December 3, 2021
A kwalitere Justin Jones ka ọ bụrụ Senior Vice President Operational Strategy & Design, ebe ọ ga-eduga nkwalite ụgbọ elu na nkwalite arụmọrụ n'ọrụ a emepụtara ọhụrụ.
Onye isi ala Gujarat ugbu a akpọrọ onye ọbịa onye ọbịa maka Mgbakọ IATO December 3, 2021
Onye isi ala Gujarat na-asọpụrụ, Shri Bhupendra Rajnikant Patel, enyela nkwenye ya maka ọnụnọ August maka ọrụ nke Mgbakọ Kwa Afọ 36th IATO nke a na-eme site na Disemba 16-19, 2021.
Uzbekistan ga-anabata ọgbakọ UNWTO nke iri abụọ na ise December 3, 2021
Ndị otu tozuru oke maka Uzbekistan ịnabata ọgbakọ UNWTO nke iri abụọ na ise, nke akwadoro na a ga-eme na 25 wee kwenye n'inyocha atụmatụ imepụta ndị ọrụ ọhụrụ na 'Redesign Tourism for the Future'.
UNWTO na-ekwupụta ndepụta kacha mma njem nlegharị anya 2021 December 3, 2021
Obodo kacha mma njem nlegharị anya site n'aka UNWTO ka ewepụtara iji kwalite ọrụ njem nlegharị anya n'ichekwa obodo ime obodo, yana odida obodo ha, ụdị okike na omenala dị iche iche, na ụkpụrụ na ihe omume mpaghara ha, gụnyere mmụta gastronomy mpaghara.
Mmeghari njem nlegharị anya Jamaica iji mefu ndị ọbịa anụ ehi December 3, 2021
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya Jamaica, Hon Edmund Bartlett, kwusiri ike na Jamaica na-ahazigharị ụlọ ọrụ njem iji hụ na ọtụtụ n'ime ego a na-enweta na mpaghara ahụ na-aga na obere ụlọ ọrụ njem nlegharị anya.
Seychelles nwere ihe ịga nke ọma na ọgbakọ UNWTO nke iri abụọ na anọ December 3, 2021
Ndị nnọchi anya nke onye minista na-ahụ maka mba ofesi na njem nlegharị anya, Mr. Sylvestre Radegonde, gara nnọkọ 24th nke United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) General Assembly nke emere site na Tuzdee, Nọvemba 30, ruo Disemba 3 na Madrid, Spain, maka onye otu. na-ekwu ka ha kparịta ụka n'ihe metụtara ụlọ ọrụ ahụ. Minista Radegonde sonyeere ya na ozi a site n'aka onye isi ode akwụkwọ maka njem nlegharị anya, Oriakụ Sherin Francis na onye isi ọrụ protocol na ngalaba na-ahụ maka mba ofesi, Mr. Channel Quatre.